In qa / QC
The kiyi J & S Botanics kuti kubudirira ndiwo yedu michina yemhando yepamusoro. Kubvira kambani hwagadzwa, tagara akasimbisa pamusoro toga uye utsanzi. We vakaripira Dr. Paride kubva Italy sezvo mukuru musayendisiti yedu uye akavaka 5 nhengo R & D chikwata vakamupoteredza. Mumakore apfuura, chikwata ichi kwakasimbiswa gumi nevaviri mishonga mitsva uye akagadzirisa zhinji michina nyaya kiyi optimize yedu kugadzirwa rikurumidze. With mipiro yavo, kambani yedu akamira kunze bhizimisi zvose muno uye munyika. Tine 7 patents inotaura zvinhu zvakasiyana-siyana zviri dzokubudisa michina. ruzivo izvi zvinoita kuti tikwanise kubudisa atakatora pamwe dzakakwirira kuchena, wakakwidzwa zvoutachiona basa, kudzika zvakasara hwakaderera simba rakawanda.
Uyezve, J & S Botanics akaita vakapakata vatsvakurudzi edu ezvinhu unyanzvi rabhoritari michina. tsvakurudzo yedu centre iri vakapakata diki uye svikiro kadikidiki dzokubudisa tangi, imwe muhombe evaporator, diki uye svikiro kadikidiki chromatography mbiru, idenderedzwa concentrator, duku Vacuum nokuomesa muchina uye Mini pfapfaidzo yakaoma shongwe, etc. All pezvakaitwa kugadzirwa inofanira kuongororwa uye mvumo murabhoritari vasati vakawanda kugadzirwa ari fekitari.
J & S Botanics anoramba huru R & S Fund ose gore inobereka gore negore panguva 15% yevanhu. chinangwa chedu ndechokuti kuwedzera zvigadzirwa zvitsva maviri ose gore uye, nokudaro, kuona mumwe aitungamirira boka iri chirimwa dzokubudisa indasitiri munyika isu.
Runhare: 0086 574 27855888
Runhare: 0086 574 26865651
Fakisi: 0086 574 87897189
How much do you know about Reis...
What is Reishi Mushroom? Lingzhi, Ganoderma lingzhi, also known as reishi, is a polypore fungus belonging to the genu...
Zvakawanda sei zvaunoziva nezve Berb ...
Chii chinonzi Berberine? Berberine ndeye quaternary ammonium munyu kubva kune protoberberine boka re benzylisoquinoline al ...
© Copyright - 2016-2017: All Rights Reserved. - Power ne neGlobalso.com